Vaovao | Fiangonana Loterana Malagasy
Ry zanaky FLM! Ho tonga eto Madagasikara ny solontenan ‘ny Fiombonan’ ny Fiangonana Loterana Erantany (FFLET) na LWF ny 6- 13 septambra 2019 hamangy Fiangonana Loterana Malagasy . Mifanindran-dalana amin’ ny fahatongavan ‘ny Papa Ray Masina io daty fahatongavana io fa saingy tsy misy izay ifandraisany fa daty no nifanojo ihany. Ny anton’ ny fahatongavana dia haneho amintsika firaisana sy fiombonana » communion » Masina . Ankoatr’ izay dia ho tonga hivory miaraka amin’ ny solontena FFLET io ny solontenan’ ny fiangonana Pentekotista avy ivelany Lutheran understanding of Freedom, Healing and Deliverance (cf.......